March 2016 « A.S.M.A
Group photo of farewell ceremony
signboard for Farewell ceremony 2016
Ven. Panna (BA)
Ven.Panna Nanda (BA)
Ven. Pandit (BA)
Ven.Sonedara (BA) President 2016
Farewell ceremony ကျင်းပခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ (22,March,2016)
5:05 AM Share:
A.S.M.A၏ နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းအတွက် စာမူဖိတ်ခေါ်ခြင်း
A.S.M.A ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များအဖွဲ့(ထိုင်း)မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမည် ဖြစ်ပါသောကြေင့် စာပေဝါသနာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများအား လေးစားစွာဖြင့် စာမူများကို အောက်ပါ လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်ပြီး ပို့ပေးကြပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
 ပေးပို့နိုင်သောကဏ္ဍများနဲ့ စာမူများ
3) ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး/ကဗျာ (သုတ/ရသ)
4) ဝတ္ထုတို/ရှည် (ဘာသာရေးသု/လူမှုရေးသုတ)
1) မြန်မာစာအရေးအသားဖြင့် ရေးသားရမည်။
2) ဆောင်းပါး စာမူသည် အနည်းဆုံး A4 (၂)မျက်နှာမှသည် A4 (၄)မျက်နှာထက်မပိုရ။
3) စာမူသည် မည်သည့် စာစောင်၊စာအုပ်များ၌ ဖော်ပြခံထားရဖူးသော စာမူမဖြစ်စေရ/မူပိုင်ဖြစ်ကြောင်း အာမခံရမည်။
4) ဝတ္ထုတို/ရှည် စာမူသည် A4 (၃)မျက်နှာထက်မနည်းစေရ၊ A4 (၅)မျက်နှာထက်မပိုစေရ။
5) ပုဂ္ဂလိက ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှု၊ အသင်းအဖွဲ့များအား ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုများ စာမူများမဖြစ်စေရ။
6) စာမူရှင်သည် အယ်ဒီတာ-စာတည်းအဖွဲ့၏ တည်းဖြတ်မှုကိုကျေနပ်စွာ လက်ခံရပါမည်။
1) စာမူရှင်အမည် ( ကလောင်အမည်)
2) ဆက်သွယ်ရရှိနိုင်သော ဖုန်းနံပါတ်၊လိပ်စာ
 စာမူပေးပို့ရန် လိပ်စာ
1) အမည်= ဦးသုန္ဒရ
2) ဖုန်းနံပါတ်= 082-334-7358
3) G.mail= thundara111@gmail.com
4) FB=Sonedara Ven
 စာမူနောက်ဆုံး ပို့ပေးရမည့်ရက်
6:34 AM Share:
Farewell ceremony ကျင်းပခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ ...